Ukuphefumlelwa - Iikhompyutheni zobuchwepheshe be-GIS - I-ESRI UC lokuqala-i-Geofumadas
Ukuphefumlelwa - Imizila ye-GIS ubuchwepheshe - iSRI UC lokuqala
NgoJulayi, 2015 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Kwi-2005 bekuyixesha lokuqala ndaya kwiNgqungquthela yabasebenzisi be-ESRI, ehlala kwindawo efanayo: I-San Diego Convention Centre, kunye neebhanki ezinkulu ezixhomekeke kwiingqameko zeglasi evulekileyo. Ukubetha kunye nama-Arabhu kunye neendevu ezinamatheko kunye neengubo ezimhlophe, ezibomvu zelizwekazi laseAfrika kunye nokumomotheka kwengqolowa kunye ne-Hispanic Hispanics ekhethileyo enethemba lokungaqhubeki ukuthabatha i-selfie entsha ukubonisa kwi-Face.
Izinto ezintathu ndizikhumbule kakhulu kumhla, apho i-10 iminyaka edlulileyo:
1. Ubomi buyintengiso.
Isigaba ngasinye seentsuku zethu sizisa iinkxalabo, ukwaneliseka kunye nokufunda. Ndikhumbula ngaloo mihla ukuba umsebenzi wam neekhilomitha 80 ukusuka ekhaya, nyana wam waxhuma uvuyo wayewulindele ibhola xa waliphulaphula kwam ukufika ngokuhlwa ngoLwesihlanu, intombi yam nje iminyaka emibini andibona ngamehlo ezinkulu bezibuza ngubani lo mfo owadlula zonke iiveki.
Ngomnye unyana wam waya kwiYunivesithi, kwaye intombi yam ayifaki inkcazelo engakumbi kunokuba ndiyangchukumise ukuba ndibe nexhala lokuba andisaphila.
Lo bubomi obumnandi. Ndiyakhumbula ukuba ngaloo nyaka ndahamba ngethuba lokuqala kwiNkomfa yomsebenzisi we-ESRI. Kwakungowesihlandlo sam sibini ukuya eUnited States kwaye sasijongene nengxaki yokwesaba kwiprojekthi endibandakanyekayo kuyo. Sasihlawulwa kodwa sasingayazi ukuba yintoni enye inyanga eyayiyiyo kuba yayisityebile malunga neenyanga ezintathu kwaye umniki-khadi wekhredithi wasinika thina uluhlu lweBhodi eliPhakathi loMngcipheko. Ngoko uMvulo omnye uRaúl wayenomboleko kum-50 pesos ukuthenga isidlo sakusihlwa kwaye athathe ibhasi ukuya eTegucigalpa ukujonga iindleko zokuhamba.
Ngomso wosuku olulandelayo ndandidla inyama yokutya enezonka ezidliwayo kwi-piquetero Restaurant yase-Embarcadero de San Diego.
2. Ukuphefumlelwa kukuphakathi kwabantu.
Ukuba phakathi kwabantu be-35,000, kwindibano enezikrini ezinkulu ezihanjiswayo ukuze zibone ubukhulu obamkelekileyo obungabonakali kwiindawo ezikude, ziyabakhuthaza. Kodwa kungekhona kwimeko, kodwa kubantu. Ukubona uJack Dangermond ebonisa ukuba ubomi bakhe bunjani, wandenza nditshintshe ingqondo yam malunga nenkolo yamanye phakathi kwerhwebo kunye nolunye, phakathi komnikazi kunye nomthombo ovulekileyo owakuboniswayo kuloo minyaka.
Sinako baphikisana kwizinto ezininzi, kodwa asimele silibale ukuba iinkampani kule ubungakanani wakha imarike ngoku siphila ikhowudi free kunye ibhokisi evaliweyo. Bonisa ukuba yayingabo okwakhokelela ukuba i-kubefundisi inginginya ezobuchwepheshe, ukuntsonkotha elabhoratri wam Geodesy I bengasazi, nabantu abathanda ngothando ezandleni zakhe, phakathi kukudelwa ulwazi ngasemva kunye nokuhambisana ukuvula iingcango abahlala kwiimeko ze geospatial.
Kwaba kwabakhuthaza gqitha ukubona ukuba ngqumba cheles kunye avuse tousled, ezifana ubuso ayesuka IsiNgesi e Infrastructure London Inspired, njengezangqa amnyama sityhile Imihla Free gvSIG. babesima kakhulu, kodwa iphefumlelwe ngoko kude amawele kuba yintoni na, phakathi imixube ezintsonkothileyo kunye nokusebenziseka ezibonakala ube yinxalenye script yokuziphatha efanayo ukuba nabo ngokwabo abonakalise.
Ukuyikhumbula okwangoku kwandinika ama-chills, ukubona ukunyaniseka nokulindela ubuchule obutsha. Zonke ziyafana, ziphefumlelwe zombini I-Award yale minyaka, kunye ne-Europa Challenge ukuba i-gvSIG iphumelele ngoku. Regio!
Ndabona kwakhona ngelinye ilanga ngenyameko efanayo, xa uHugo Chavez efika ezweni lam ukuhlambalaza abantu abashishini phakathi koMongameli woMongameli. Ubomi bandenza ndiyeke ukukholelwa phantse kuzo zonke izinto awazithethayo, kungekhona ngeengcamango kodwa ngamava. Kodwa ndamangaliswa yindlela aphefumlelweyo ngayo kwiingcamango zakhe, akukho nto enokuyenza kunye neemifanekiso zengqungquthela kwilizwe lam elaligqoke iifowuni eziluhlaza kwindlela kaFidel Castro kunye noTe Guevara. Ngaloo mva kwakusisifundo sokungahloneli ilungelo elihle kunye nesihlalo sokuphefumlelwa kwabo bacinga ukuba bekhohlo.
Ukuphefumlelwa kubantu ..
3. Imfihlo ikwazi apho izinto zihamba khona.
Kodwa ukuba kukho into enokufundwa ekubeni kwisiganeko esinjengenkomfa yomsebenzisi we-ESRI, kukuqonda apho izinto zihamba khona. Ezi ngqungquthela aziyi kufunda inkohliso entsha, akukho nto iphindaphindiweyo yokuphindaphinda ixesha, umbuzo, ngaphantsi xa siyimeko yaseSpeyin ukuba sikhetha ukuqonda umyalezo kunokuchitha ixesha kwiinguqulelo zakho. Kuyaqondwa ngenye yezinto eziza kwenzeka kwiminyaka emibini ezayo, kungekhona kwesoftware kuphela, kodwa kwipatheni engenakuguqulwa kwimarike yehlabathi.
Xa ubuyela kumhlaba wakho, kunokwenzeka ukuba ujabulele uluntu olufanayo kwifomati encinane; phakathi iziqhulo ebhekiswe Raul, incasa engaqhelekanga ukuba Rock ziwe Chamaco, izakhono ezitya UJorge, amehlo emihle Melissa, es elungileyo uManuel, ukutshintsha Wilson inyanga, isithuba ndatshaya Barcenas. Lelo lizwe apho kunzima khona ukuba litshintshe kwaye apho kungekho nto ihleka khona. Kulapho, ngaphandle kokuyiqonda, ukuqonda ngokuqhelekileyo kusishukumisela ukuba silungiselele indlela eya kwiindlela esizibonayo; uqaphele ukuba obonwe eUnited States kuza kwenzeka apha kwiminyaka emihlanu, eyabonwa eSpain ingaba yintathu, kwaye eyabonwa eMunich ayinakwenzeka apha.
Kodwa kukho apho ukutshaya kwezinto eziphathekayo, okuvela kwiimpawu ze-UML ze-astral ukuya kumanyathelo okuqala asebenza oorhulumente kamasipala. Abo kunokukhokelela GIS ngexesha ngokwenza CAD elungileyo, ukuba lowo kusibekela 3D encinane GML ukuba ezisisiseko zakho lokubaleka ukuhlawula irhafu ekulweni ngaphandle ingelulo njalo unesandla kwi urhwaphilizo ngaphakathi; apho ubona i kancinane umdla WFS-T noloyiko lwakhe kukuba kwiNkundla Ephakamileyo of Auditors Niziphakamise ingxelo uxanduva ngokusilela ukuphumeza izivumelwano kuvavanywa amaxabiso kule minyaka mihlanu idlulileyo.
Ngoko kuqikelelwa, iNkomfa yomsebenzisi we-ESRI ayifanele ibangele uxinzelelo kumqhubi we-brand, okanye ukungafuni ukunyanzelisa i-Taliban yekhowudi yamahhala. Yisiganeko sokuphefumlelwa ngengqondo evulekile, ukubona apho izinto zihamba khona, isiqingatha sazo zikopishwa kwiingcamango zesofthiwe esiluncedo, njengoko esinye isiqingatha saloo nto sasizalwe khona.
Kwaye njengoko kubonisiwe, ndishiya iividiyo ze-5 zezona zinto zilungileyo kakhulu esinazo eSan Diego namhlanje.
I-GIS emhlabeni jikelele. 1 inxenye
Vector Map Tile
I-Big Data & GeoAnalytics
Bona ezinye iiVideos
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukhuthazo oluxabisekileyo kwi-gvSIG - I-Award ye-Europa Challenge
Post Next I-20 Isinyathelo sokwakha isixeko ukususela ekuqaleniOkulandelayo "
Khuphela idatha yeqondo lobushushu kunye nemvula naphina emhlabeni usebenzisa uGoogle Earth
Izicelo ezingama-30 zeGIS
Iingcebiso kunye namacebo okusebenza ngeentsomi kwiArcGIS Pro
Ukuhlalutya iziBonelelo zeMpilo yeNgqondo yeZithuba eziGreen usebenzisa i-GIS
I-QGIS kunye neesoftware zesoftware